Basikety – Kianjan’Andraisoro : Horaisin’i Mbola Rajaonah ny fanamboarana ny kianjan’Andraisoro -
AccueilRaharaham-pirenenaBasikety – Kianjan’Andraisoro : Horaisin’i Mbola Rajaonah ny fanamboarana ny kianjan’Andraisoro
Feno 10 taona ny kliobana basikety Andraisoro Tia Basket-ball na AT2B tarihin’ny filohany, Fanja Rabenjamina sy ny mpandrindra ankapobeny, Pascal Rasaony. Noho izay indrindra, dia amin’ny alalan’ny hetsika izay nahafantarana azy ireo hatramin’izay no hankalazana izany tsingerin-taona izany. Ny fifaninanana “Fety de Basikety”, izay miditra amin’ny andiany fahatelo no nentin’ny klioba AT2B mankalaza io faha-10 taonany io eny Andraisoro.
Araka izany, nosafidian’ny mpikarakara ho mpiahy ny hetsika i Mbola Rajaonah, filoha tale jeneralin’ny vondrona orinasa an-gazety RLM Communication ahitana ny La Ligne de Mire, Triatra, La Dépêche de Madagascar, Le Citoyen, Akon’i Madagasikara, AZ Télé/Radio, On Air Télé/Radio, sns.
Tsy vitan’izay fa horaisin’i Mbola Rajaonah an-tanana ihany koa ny fanamboarana ny kianja filalaovana basikety ao Andraisoro, izay hanatanterahana ny fifaninanana “Fety de Basikety”. Voalaza fa hisy fanatsarana ny kianja eny Andraisoro, izay hofefena manodidina ary hatsangana ihany koa ny “gradins” natokana ho an’ny mpijery. Natao ho fisarihana ny tanora hitia sy hirona misimisy kokoa amin’ny fanatanjahantena no anton’ny fanamboarana ny kianja.
Ankoatra izay, raha ny mahakasika manokana ny fifaninanana “Fety de Basikety”, fankalazana ny faha-10 taonan’ny klioba AT2B, efa nanomboka ny 12 mey teo, ary tsy hifarana raha tsy ny 12 aogositra izao ny hetsika. Ekipa manodidina ny 90 eo ho eo, izay mitsinjara amina sokajy enina (U12 zazalahy, U18 zazalahy, seniors lahy sy vavy, veterans lahy sy vavy) no mifaninana ka anisan’ny mandray anjara amin’izany eo amin’ny sokajy “veterans” ny BBCM misy ny filoha tale jeneralin’ny vondrona RLM Communication.
Ho an’ny fihaonana omaly, dia niditra tamin’ny lalao ampahavalon-dalana ny teo amin’ny sokajy “veterans”. Hatreto, mbola tsy resy mihitsy izy ireo ary tafakatra hiatrika ny lalao am-pahefa-dalana ny BBCM rehefa nandavo ny FBC tamin’ny isa 89 noho 64.
Fampahafantarana ny vaovao. Mitohy hatrany amin’izao fotoana ny ezaka ataon’ny fitondrana amin’ny ady amin’ny Pesta. Voalohan-draharaha teo anivon’ny filankevitry ny governemanta omaly io, ary nanaovan’ny praiminisitra tatitra tamin’ireo minisitra mialohan’ny filankevitra. Tamin’izany no nahalalana fa ...Tohiny